सांसद सुयर्माको पहलमा झोलुङ्गे पुल - Pradesh Dainik
सांसद सुयर्माको पहलमा झोलुङ्गे पुल
प्रदेश १ का सांसद सुर्यमाराज राईको पहलमा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएको छ । मोरङको कानेपोखरी ५ बत्तरबिघेबाट बेलबारी ८ को राधानगर जोड्ने पुलको शनिवार राइले शिल्यान्यास गरेका छन् ।
लामो समय देखि बत्तरबिघे र राधानगर आउँजाउँ गर्नका लागि निकै कठिन अवस्था थियो । धेरैवर्ष अघिबाट झोलुङ्गे पुलका लागि पटक पटक पहल गरेको भएता पनि अहिले मात्रै सफलता पाएको सांस्द राइले बताए । आफु सामाजिक काममा सक्रिय रहँदा नै जिविसबाट समन्वय गरेर डिपिआर तयार गर्न लगाएको राइले बताए । पटक पटक पहल गरेर योजना सफल बनाउन लागेको राइको भनाइ थियो । यो पुल निर्माण संगै बत्तरबिघे र राधानगरका हजारौँ मानिसले सुविधा पाउने राइको विश्वास छ । विकासका लागि राजनीतिक पाट्रि र आस्थाको समेत वास्ता नगर्ने राईले सदैव जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्ने गरेका छन् ।
सिल्यान्यास पछि बोल्ने क्रममा राइले खोला दोहनको विषयलाई पनि उठाएका छन् । राइले भने “लामो संघर्ष पछि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न तयारी भयो तर खोला दोहनका कारण यो पुल कति दिन टिक्ला भन्ने चिन्ताले छाती पोल्न थालेको छ । मेरो पहलमा नै खोलाको छेउमा स्पर निर्माण गर्न लगाँए, पुल जोगाउनका लागि पहिले खोलालाई सही दिशामा हिडाउन पर्छ तर अहिले पैशामा बिक्नेहरुले खोला दोहन गरेर स्पर र पुल नै बगाइदिने भए ।” खोला तथा चुरे दोहनका विषयमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुदैँ आएका राइले स्थानीयलाई खोला दोहनका विषयमा सबै जागरुक हुन पनि सुझाएका छन् । राइ नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का सचेतक समेत हुन् ।
झोलुङ्गे पुल बनेपछि दुबैतर्फका बासिन्दालाई ठुलो राहत पुग्ने बेलबारी ८ का वडा अध्यक्ष धनपति गौतमले बताए । पुल निर्माणका क्रममा वडाले गर्नुपर्ने साथ र सहयोगका लागि सदैव आफु तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि गौतमले गरेका छन् । वडा नं. ८ का करिब ३ हजार घरधुरी यो पुल बनेसंगै लावान्वीत हुने पनि गौतमले बताए ।
कानेपोखरीको वडा नं. ५ को सुमधुर सम्बन्ध बनाउनका लागि लागि परेकाले यो पुल बनाउन सम्भव भएको ५ नं. वडा सदस्य रतिलाल चौधरीले बताए । चौधरीले भने “वडावासीको खुसीको सिमा छैन्, अब हामी सबैको दुःख गर्ने दिन गएको महसुस भएको छ ।”
पुलको लम्बाइ जम्मा ९१ मिटर रहेको छ । सो पुल निर्माणका लागि जम्मा ७८ लाख ६३ हजार १०७ रुपैया ३ पैसा लागत स्टिमेट रहेको सो पुल निर्माणमा खटिरहेका इन्जिनीयर मनोज कटुवालले जानकारी दिए । पुल निर्माणका लागि कानेपोखरी गाउपालिकाले ६ प्रतिशत् ४ लाख १७ हजार ७८६ रुपैया ४२ पैसा, जनश्रमदानबाट २ प्रतिशत् १ लाख ५७ हजार २६२ रुपैया १४ पैसा र स्वप केन्द्रबाट ९२ प्रतिशत् ७२ लाख ३४ हजार ०५८ रुपैया ४७ पैसा लगानी गरेको छ ।
आ.व. ०७५/०७६ को असार मसान्त सम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले दु्रत गतिमा काम अगाडी बढाइने पुल निमार्ण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुर्यबहादुर राईले बताए । काम गर्नका लागि निकै कठिन भएता पनि सबैको साथ र सहयोगबाट समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने अध्यक्ष राइले बताएका छन् ।